Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. क्वारेनटाइनमा खटिएका दुई प्रहरीमा कोरोना संक्रमण – Emountain TV
जनकपुरधाम,१२ जेठ । जनकपुरधाम सोमवार धनुषामा संक्रमण पुष्टि भएका तीनजना मध्ये दुई जना नेपाल प्रहरी भएको खुलेको छ । सोमवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा धनुषाका ३१ र ४५ वर्षीय पुरुष भनिएकाहरु नेपाल प्रहरीमा कार्यरत खुलेको हो ।
संक्रमित दुवै प्रहरी क्वारेनटाइनमा ड्युटी गर्दै आएका थिए । संक्रमितमध्ये एक जना प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) हुन् भने अर्को जनाको दर्जा खुलेको सकेको छैन । संक्रमित दुवै प्रहरी हाल इलाका प्रहरी कार्यालय फुलगमामा कार्यरत रहेका छन् ।
त्यस्तै अर्का ३० वर्षीय नगराईन नगरपालिका- ३ फुलगम्माका पुरुष हुन् । उनी जेठ ६ गते दिल्लीबाट आएका थिए । गाउँमा आएपछि उनलाई प्रादेशिक क्वारेन्टाइनमा राखिएको प्रादेशिक क्वारेन्टाइन गंगुलीका प्रमुख प्रमुख सन्तोष ठाकुरले बताएका छन् ।
संक्रमित तीन जनाको जेठ ७ गते स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ पठाइएको थियो ।
यस अघि प्रादेशिक क्वारेन्टाइन गंगुलीमा लगातार पाँच जना संक्रमित भेटिएपछि उक्त क्वारेन्टाइनलाई नेपाली सेनाले सिल गरेको थियो । धनुषाका १२ जना संक्रमित मध्ये ८ जना संक्रमित प्रादेशिक क्वारेन्टाइन गंगुलीमै परीक्षण गर्दा पाइएको हो । तीन जना संक्रमितलाई विशेष अस्पताल जनकपुर ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।